China lolo kely monina ao anaty fanjaitra Famokarana sy orinasa | Weirui
Fanjaitra kely ao anaty lolo
1.Araka ny fampidirana, dia mety hipetraka mandritra ny fotoana maharitra ao amin'ny lalan-drà ary avy eo ny fampidirana ny rafitra fampidirana dia azo ampidirina ao amin'ny fampidiran-drakitra mankany amin'ny fampidirana, manalavitra ny venipuncture, mampihena ny fahasimban'ny sela ary ny aretina ary mampihena ny hamafin'ny mpiasa miasa; 2. Azo ampivoarina ...
1.Araka ny fampidirana, dia mety hipetraka mandritra ny fotoana maharitra ao amin'ny lalan-drà ary avy eo ny fampidirana ny rafitra fampidirana dia azo ampidirina ao amin'ny fampidiran-drakitra mankany amin'ny fampidirana, manalavitra ny venipuncture, mampihena ny fahasimban'ny sela ary ny aretina ary mampihena ny hamafin'ny mpiasa miasa;
2.It dia afaka mivelatra ambanin'ny taratra X;
3. Catheter lava lava Transparent sy famolavolana mpampifandray kateter lava mba hahitana mora ny fiverenan-dra;
4.Ny fivorian'ny catheter dia miaraka amina plug mitoka-monina, izay manakana ny mpiasan'ny fitsaboana tsy hitondra ny ràn'ny marary mandritra ny fandidiana, manala ny otrikaretina ary miantoka ny fiorenan'ny fanjaitra rehefa ampidirina ao amin'ny lalan-dra.
5.Model: toy ny penina, lolo, miaraka amin'ny tsindrona tsindrona, elatra kely, modely Y
Izy io dia ampiasaina amin'ny tsindrona hypodermic any amin'ny hopitaly, tobim-pitsaboana ary toerana hafa.
Teo aloha: F-fanjaitra
Manaraka: fanjaitra karazana penina